गिरावटबाट बुढाइलाई कसरी सुरक्षित गर्ने? | OMG समाधानहरू
पतनबाट वृद्धहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा मदत गर्न सकिन्छ?
यहाँ, केहि पतनहरू छन् जो पतनबाट वृद्धको मदत गर्न सक्छ -
एक शोध अनुसार, यो पाएको छ कि तपाईंको लंच पछि थोडा हिँड्दा एक पतनबाट वृद्धलाई बचाउन सक्छ। यो रक्तचापमा कमीले पछ्याएको छ।
तपाईंको आहार पछि थोडा हिँड्नु भएको छ, प्रायजसो चिसो तहमा कमी को लागी हुन्छ।
तपाईंको आहार संग सानो गिलास पानी हुनु, सम्मोहन को विभिन्न परिणामहरु बाट बच्न।
अब - एक दिन तपाईंको स्मार्ट फोनका लागि विभिन्न स्वास्थ्य अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्। यसले स्वचालित रूपमा असामान्य स्थितिहरू बुझ्दछ र यसलाई तपाइँको कम्प्युटरसँग सिंक्रोनाइज गर्दछ। यसबाहेक, यसले स्वचालित रूपमा मद्दतको लागि कल गर्दछ यदि यसले केहि छुटेको छ।
विभिन्न capacitive फ्लोर सेन्सर र थर्मल क्यामेरा प्रणाली जुन कुनै असामान्य अवस्थाको अर्थ र तपाईंको प्रियजनहरूलाई रिपोर्ट गर्नेछ। यसले अधिक गोपनीयता प्रदान गर्दछ र तपाईंको फर्श सारिएको बेला काम गर्दछ।
यस प्रविधिलाई ग्राहक ट्रयाकिङको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र गृह सुरक्षा निगरानी उद्देश्यहरू।
उत्तम उपकरणहरू जसले स्वचालित रूपमा पतन बुझ्न सक्छ। र, जसले कम्पनीको स्वतन्त्र प्रेषकलाई कल गर्दछ, जसले मौसमलाई सबै कुरा सही छ भनेर सुनिश्चित गर्नेछ वा होइन। यदि त्यसो भए उनीहरूले आपातकालीन सेवाहरूसँग सम्पर्क गर्दछन्।
यो उपयोगी हुनेछ यदि प्रयोगकर्ता दबाइमा छ, बेहोश र यदि त्यो त्यो समयमा यो कुरा बिर्सनु हुन्छ।
त्यसकारण, त्यहाँ बजारमा आन्तरिक प्रणालीहरू छन्। त्यसोभए कसले रोज्नुहुन्छ?
यहाँ हामीले बजारमा उपलब्ध केहि शीर्ष सुरक्षा अलर्ट प्रणाली सूचीबद्ध गरेका छौं।
मेडिकल गार्डन चेतावनी प्रणाली एक लोकप्रिय चिकित्सा अलर्ट प्रणाली हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई 400 मिटर सम्म सार्न सक्षम बनाउँछ कन्सोलबाट सुरक्षित हुँदा। तपाईं यसलाई बेल्ट, जेब, कलाई, गर्दनमा लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ ... यसको ब्याट्री जिन्दगी 32 घण्टा वरपर छ। तपाईं यसलाई आफ्नो घर बाहिर बाहिर लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंको जीपीएस सक्षम भएको। साथै, यो तापमान संवेदनशील गुणहरू पनि प्रदान गर्दछ, जसको अर्थ यो अत्यधिक तापमान पत्ता लगाउन सक्छ।
मेडिकल संरक्षक स्थापना गर्न सजिलो छ र कम्पनीले 24 *7हेल्पलाइन प्रदान गर्दछ। कर्मचारी 911 प्रमाणित छ जसको मतलब तपाईं सीधा एम्बुलेंसको लागि कल गर्न सक्नुहुन्छ।
जीवन अस्थायी चिकित्सा अलर्ट प्रयोजनों को लागि पनि जानिन्छ। यसको दायरा 146 मीटर वरपर छ। प्रयोग लटकन पनरोक छ। यसको ब्याट्रि जीवन पनि 32 घन्टा हो। यो सेलुलर आधारित छ र तपाईं यो आफ्नो घर बाहिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जीवन फलो 24 *7ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ। यो सेवा प्रयोग गर्नको लागि तपाईंले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। तथापि, तपाइँको सम्झौता रद्द रद्द गर्दा कुनै शुल्क शुल्क लगाइएको छैन।
बे अलार्म मेडिकल
बे अलार्म मेडिकलसँग 305 मिटरको दायरा छ। लटकन्ट ब्याट्रीको ब्याट्री ब्याक को एक 32 घण्टाको साथ।
यो यन्त्रको सबैभन्दा राम्रो विशेषताहरूमध्ये यो कार्बन मोनोअक्साइड र धूम्रपान निगरानी प्रदान गर्दछ।
तर नकारात्मक पक्षमा यसले GPS लाई समर्थन गर्दैन जुन यसको अर्थ तपाई आफ्नो घर बाहिर बाहिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यसको कन्सोलसँग मद्दत बटन रहेको छ जुन यसलाई कठिन परिस्थितिहरू थिच्न सजिलो छ।
"तयार र रोक्नुहोस्, मरम्मत र पश्चाताप नगर्नुहोस्"।
यदि तपाईंले आफ्नो आफन्तहरू, परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू, वा सहकर्मीहरू पाउने भेट्टाउनुभयो भने। त्यसपछि, चाँडै सकेसम्म आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, यो गम्भीर हुन भन्दा पहिले। पतनबाट वृद्धालाई सुरक्षित तरिकाले कसरी मद्दत गर्न सक्छ?
7194 कुल दृश्यहरू 14 हेराइ आज